Shacabka Somaliland Oo Saaka U Dareeray Goobaha Codbixinta Doorashada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shacabka Somaliland Oo Saaka U Dareeray Goobaha Codbixinta Doorashada
Waxaa saakay deegaanada Somaliland si rasmi ah uga bilowday doorashooyinka Goleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka oo ay ku tartamayaan 82 Xildhibaan oo Baarlamaanka ah iyo 249 Golaha guurtida.
Dadweyne farabadan ayaa safaf dheer u galay goobaha ay ka socoto Codbixinta oo kala yaalla Gobolada Maroodi-Jeex, Toghdeer, Sanaag, Soo, Awdal iyo Saaxil, waxaana dadka ay u Codeynayaan Goleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka.
In ka badan hal malyan oo qof ayaa dhiibanaya codadkooda, iyadoona goobaha codbixinta ay gaarayaan 2,709, waxaana siweyn loo adkeeyay amniga, sidoo kalena goobaha la geeyay Ciidamo badan.
Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa uu ka Codsaday dhammaanba xubnaha murrashaxiinta ah ee ka qaybgelaya doorashooyinka goleyaasha wakiillada iyo deegaanka inay u hoggaansamaan natiijada soo baxda, una turaan nabadgelyadaba.
Shacabka Somaliland Oo Saaka U Dareeray Goobaha Codbixinta Doorashada was last modified: May 31st, 2021 by Admin
Safiirka Itoobiya oo hoygiisa ku booqday Madaxweynaha Jubbaland
Beesha Caalamka oo dadaal ugu jirta isu keenida DFS iyo Dowlad Goboleedyada
Hantidhawraha guud ee Qaranka oo loo doortay xil muhiim ah
Dhageyso:-Dood ku saabsan Cadaalada gaar ahaan haweenka iyo xaquuqdooda.
Kulan loogu hadlayey Doorashada 2020/21 oo lagu qabtay magaaladda Muqdisho